INGUBO KA-ALAYA F YAKAMUVA EVELA KUSONAM KAPOOR AHUJA KU-INSTAGRAM YAKHE - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMFASHINI
U-Alaya F uthi Ngiyabonga kuSonam Kapoor Ahuja Ngale Ngubo Enhle; Thola Intengo Yengubo
Ikhaya Imfashini Ikhabethe le-Bollywood I-Bollywood Wardrobe Devika Tripathi Ngu UDvikavika Tripathi | ngoSepthemba 18, 2020
U-Alaya F uthe ngiyabonga kuSonam Kapoor Ahuja ngengubo yaseBhaane, u-Alaya ayigqoke muva nje futhi wayisa ku-Instagram feed ukuhlanganyela ukubukeka kwezithombe nabalandeli bakhe. Futhi, wayebukeka emuhle efile esithombeni sakhe sezithombe futhi umdlalo wakhe we-pose wawunamandla. Nakanjani walwa kanzima nabesifazane bezimfashini abanolwazi ngengubo yakhe nokubukeka kwakhe. Sithande nokubukeka kwakhe okusha futhi isitayela senziwa ngokuncane futhi. Ngakho-ke, ake sikhulume ngalokhu kubukeka kwakhe kwakamuva.
I- Jawaani jaaneman umlingisi ubhale isithombe sakhe ngokuthi, 'UKHANGELWE ngale ngubo evela ku- @ bhaane! Ngiyabonga @sonamkapoor! Angikwazanga ukumelana nokwenza i-photoshoot encane ekhaya nasezinhliziyweni''Futhi ngokuqinisekile sicabanga ukuthi le ngubo kaBhaane kufanelekile-ukucabanga ngayo ngoba ibibukeka isesimweni esihle futhi iyinkimbinkimbi ngasikhathi sinye. Ilungele iphathi, ini U-Alaya F. ukugqoka kwakuyisiketi esikhuthazwe yi-fishtail kanye ne-flirty mermaid top evela kulo mkhiqizo. Le ngubo yakhe ehlukile ibinama-accents aminyene nama-lapels. Okuphezulu kanye nesiketi kungamanani entengo ku-INR 3500 lilinye, ngakho-ke lokhu kubhanqwa kungakubiza i-INR 7000 noma uma ufuna ukonga imali, ungathenga isiketi noma ngaphezulu nje.
Yebo, besiyithanda phezulu nesiketi njengenhlanganisela. Umlingisikazi ufinyelele ukubukeka kwakhe nge-pendant ye-chic ehambisana kahle nokubukeka kwakhe. Ukubukeka kwakhe kwakukuncane futhi ukwakheka kwakusha nge-pink lip shadow, amathambo ahlanganisiwe, nesithunzi samehlo esicashile. I-tresses eshaywe ngumoya ingeze umphumela. Impela sikuthandile lokhu kubukeka kwe- Ama-Alaya F's . Ucabangani ngezingubo zakhe nokubukeka kwakhe? Sazise lokho.
Ngokuzithoba: Alaya F's Instagram
ama-movie esibhakabhaka humpty sharma ki dulhania
izinhlobo ezahlukene zezinwele zamantombazane aseningizimu indian
wazi kanjani ukuthi intombazane iyakuthanda kodwa iyakufihla
kanjani ukususa izinwele ebusweni unomphela ngokwemvelo ekhaya
khulisa usayizi webele ngesonto
kanjani i-rangoli phansi